Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Milyan sameeyayaasha
Fadlan ka raadi hoosta MillionMakers.com's Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ("Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah").
Ujeedada Nidaamkayaga Asturnaanta ayaa ah in si cad loogu sharraxo ereyada fudud iyo hab qeexan, daahfurnaan iyo faham, sida aan u maareyno xogtaada shakhsiyeed. Xogta shaqsiyeed waxaa lagu heli karaa qaab dhismeedka adeeg, qaab xulasho, rasiid adeeg aad adigu bixiso ama haddii aan maareyno xogtaan markii aad booqaneysid bartayada internetka. Siyaasadayadu waxay damaanad qaadeysaa ilaalinta xuquuqdaada, qarsoodinimadaada iyo amniga macluumaadka aad nagu aaminay, iyadoo la raacayo waajibaadka sharci ee ku saleysan dhowrista macluumaadka shakhsi ahaaneed iyo gaar ahaan, iyadoo la raacayo waajibaadka daah furnaanta. Xaaladaha qaaska ah, waxaan u istcimaali karnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed jimicsiga ama difaaca xuquuqda xuquuqda dacwadaha sharciyeed.
Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed
Maamulada Dadweynaha iyo Hay'adaha marka canshuurta, shaqada, amniga bulshada ama sharci kale oo la dabaqi karo u baahan yihiin.
Loo-shaqeeyeyaasha suurtagalka ah, wakaaladaha shaqaaleynta, la-hawlgaleyaasha saddexaad, guddiyada ogeysiiska shaqada iyo isku-duwayaasha fursadaha shaqo si loo kordhiyo suurtagalnimadaada inaad ku guuleysato jagada xirfadle ee kugu filan.
Shirkadaha mas'uulka ka ah habeynta macluumaadka, sida alaab-qeybiyeyaasha ina siiya adeegyo sida lataliyayaal dibadeed iyo la-taliyayaal xirfadleyaal ah, qareenno, xisaab-bixiyeyaal, xisaabiyeyaal, bangiyo / maaliyadeed, khabiiro kombiyuutar, wakiilo socdaalka, kuwa wax tixraaca, aqoonsiyo iyo xukun dambi markii ay kacaan iyo u hogaansanaato sharciga.
Wareejinta xogta caalamiga ah ayaa waliba laga yaabaa inay ku dhaqaaqdo ficilkii hore ee aan raaci doonno APPs, Qoddobada caadiga ah ee Qandaraasyada ee ay meel mariyeen Komishanka Yurub iyo Garsoorka Asturnaanta ee EU-USA si loo dammaanad qaado kuwa wareejinta loo gudbiyey waddammada aan lahayn go'aan ku habboon. oo ka socota Guddiga Yurub. Si kasta ha noqotee, qaybaha saddexaad ee macluumaadka gaarka ah ee shakhsiyaadka lala wadaago waxay horey u xaqiijiyeen qaadashada tillaabooyin farsamo iyo abaabul oo kufilan ilaalinteeda saxda.
Sharaxaada waxaa lagu sameynaa annaga oo ku saleyna si qarsoodi ah ama haddii kale sida sharciga waafaqsan. Waxaan qaadnaa talaabooyin macquul ah duruufaha si aan u hubinno in qolo saddexaad oo aan u soo bandhigno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ay sidoo kale u adeegsato macluumaadkaaga shakhsiyeed sida waafaqsan GDPR iyo Sharciga Qarsoodiga.
Ilaalinta Macluumaadkaaga Shaqsiyeed
Waxaan qaadnay tallaabooyin farsamo iyo abaabul oo lagama maarmaan u ah in la ilaaliyo heerka loo baahan yahay ee amniga iyo qarsoodiga ee la xiriira macluumaadka shaqsiyadeed ee la farsameeyo iyo sidoo kale, waxaan dejinay farsamadii lagama maarmaanka ahayd si looga fogaado sida ugu fiican ee awooddeena, adeegsiga aan habooneyn, helitaanka aan la oggolaan, wax ka beddelka sharci darrada ah, ka saarista iyo xog luminta
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ayaa quseeya www.millionmakers.com, kaasoo ay leedahay kuna shaqeyso MM LLC. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu sharxayaa sida aan u ururinno oo aan u adeegsanno macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aad ku bixiso websaydhkeenna. Waxay kaloo sharraxaysaa xulashooyinka aad heli karto ee ku saabsan adeegsiga macluumaadkaaga shakhsiyeed, iyo sida aad u heli karto oo aad u cusbooneysiin karto macluumaadkan.
1. Ururinta macluumaadka iyo isticmaalka
Waxaan kaa aruurinaa macluumaadka shakhsiyeed ee soo socda adiga.
Macluumaadka xiriirka, sida magacaaga, cinwaanka emaylkaaga, cinwaanka boostada iyo lambarka taleefankaaga.
Macluumaadka biilasha, cinwaanka degenaanshaha iyo cinwaanka biil.
Macluumaadka ku saabsan meheraddaada, sida magaca shirkadda, cinwaanka, nooca ganacsiga iyo milkiilaha / ka-faa'iideystayaasha.
Macluumaadka aad u gasho goobta shaqada, kala-sooca, isku-xidhka bulshada, hantida maguurtada ah, iyo adeegyo kaleba waa arrimo ku saabsan doorashadaada shakhsi ahaaneedna masuul kama lihin.
Waxaan ururin karnaa macluumaadka shaqsi ee dhinacyada sadexaad marka aad ku darto magacyada iibsadaha, iibiyaha, adeeg bixiyaha, saamilayda ama ka-faa'iideystayaasha foomamka dalabkayaga. Aruurinta macluumaadka shaqsiyeed ee lagu garan karo qofka saddexaad waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan u noqoto in laga shaqeeyo oo la diiwaangaliyo amarkaaga badeecadaha ama adeegyada qaarkood. Macluumaadkan uma adeegsan doonno ujeedo kale oo ganacsi. Dhinacyadan saddexaad ayaa nagala soo xiriiri kara at info@millionmakers.com inaad na weydiisato inaan ka saarno macluumaadkan keydkayaga.
Waxaan u adeegsanaa macluumaadka aan aruurinno:
Kuu soo diri doonaa amar xaqiijin.
Qiimee baahiyaha ganacsigaaga si loo go'aamiyo alaabada ku habboon.
Inuu kuu soo diro sheyga la codsaday ama macluumaadka.
Ka jawaab codsiyada adeegga macaamiisha.
Waxaan kuu soo diri doonaa isgaarsiinta.
Samee dadaal ku habboon.
Ka jawaab walaacyadaada iyo su'aalahaaga.
2. Wadaagida macluumaadka
Waxaan macluumaadkaaga shakhsiga ah la wadaagi karnaa dhinac saddexaad oo keliya dariiqooyinka lagu qeexay siyaasadan qaaska ah. Waligeen kama iibinno macluumaadka shaqsiga ah macmiilkayaga qeyb saddexaad.
Waxaan u siin karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed shirkadaha bixiya adeegyo naga caawiya hawlaheena ganacsiga (tusaale; socodsiinta dalabkaaga / bixintaada, adeegyada socdaalka, adeegga fiisaha, rukhsadaha shaqada, la-talinta waxbarashada, iibsashada / iibinta ganacsiga jira, diiwaangelinta ganacsigaaga, shati siinta, furitaanka akoon bangiga, akoonnada bannaanka u soo gala ama bixinta adeegga macaamiisha). Shirkadahaan waxaa loo oggol yahay inay u isticmaalaan macluumaadkaaga shakhsiyeed keliya sida lagama maarmaanka u ah bixinta adeegyadan.
Qaar ka mid ah boggeena ayaa adeegsada "farsamaynta qaabeynta" si loogu adeego nuxurka iyo ka imanaya adeeg bixiyaasheena (sida processor-ka lacag-bixinta) iyadoo la ilaalinayo muuqaalka iyo dareenka boggan. Fadlan la soco inaad macluumaadkaaga shaqsiyeed siineyso dhinacyadan saddexaad oo aanad siineynin www.millionmakers.com.
Waxa kale oo laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno macluumaadkaaga qaaska ah:
Sida uu sharcigu farayo, sida in loo hoggaansamo maxkamad-keenis, ama habraac sharciyeed oo la mid ah.
Markii aan aaminsanahay, aaminaad wanaagsan, shaacintaas waxay lama huraan u tahay inaan ilaalino xuquuqdeena, aan ilaalino amnigaaga ama amniga dadka kale, baarno khayaanada ama aan ka jawaabno codsiga dowladda.
Haddii aan ku lug leennahay mideynta, helitaanka, ama iibinta dhammaan ama qeyb ka mid ah hantidayada (taas oo kiis ahaan lagugu ogeysiin doono emayl iyo / ama ogeysiis caan ah oo ku jira websaydhkeena wixii isbeddel ah ee lahaanshaha ama adeegsashada macluumaadkaaga shaqsiyeed , iyo sidoo kale, wixii xulasho ah oo aad lahaan karto ee ku saabsan macluumaadkaaga shakhsiyeed).
Qof kasta oo saddexaad, adoo wata oggolaanshahaagii hore.
Waxaa naga go'an inaan bixinno heerka ugu sarreeya ee amniga iyo asturnaanta. Dhamaan talaabooyinka khadka tooska ah, oo ay kujirto socodsiinta lacagaha-kaarka-amaahda, waxaa loo fuliyaa si aamin ah iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda, oo ay taageereyso biraawsarkaaga, kaas oo sirta macluumaadka dhammaan loo soo diray. Waxaan qaadeynaa taxaddar kasta si aan uga ilaalino macluumaadkaaga shakhsiyeed khasaaro, siideyn, marin u helis sharci darro ah, marin-habaabin, beddelaad ama burburin oo aan u xafido macluumaadka shakhsiyeed ujeeddada aad noo siisay oo keliya.
GDPR (Sharciga Guud ee Ilaalinta Macluumaadka Guud)
Si loo ilaaliyo macluumaadkaaga qaaska ah ee shakhsi ahaaneed, dhammaan xogta ku kaydsan xog-hoosaadyadeena, ha ahaato khadka tooska ah ama khadka tooska ah, waxaa lagu ilaalin doonaa iyada oo la raacayo nidaamka GDPR ee EU (Xiriirka Nidaamka Ilaalinta Xogta Guud ee Sharciga Midowga Yurub), oo dhaqan gelaya si buuxda May 25th 2018.
MM LLC ma aruuriso mana socodsiiso xogta marka laga reebo marka ikhtiyaar ahaan aad adigu ku siiso. Waxaan ballan qaadeynaa inaan si adag u raacno heerarka amniga caalamiga ah iyo heerarka ilaalinta asturnaanta.
Waxaan kuu soo diri karnaa keliya macluumaadka ugu habboon ee Adeegyada Socdaalka, Adeegyada Waxbarashada, Adeegyada Shirkadaha, Canshuuraha iyo Xisaabaadka, Fursadaha Ganacsiga, oo ay gacanta ku hayaan kooxdeena khibradda u leh, kuwaas oo ah shaqsiyaadka qiimeeya asturnaanta macluumaadka shaqsiyeed.
4. Raadinta teknolojiyada / buskudka
Cookie waa feyl yar oo qoraal ah oo ku kaydsan kombuyuutarka isticmaalaha ujeeddooyin rikoodh ah. Waxaan u isticmaalnaa cookies-ka bartayada. Kuma xidhinno macluumaadka aan ku kaydinayno cookies-ka wixii macluumaad ah ee shakhsi ahaan lagu garan karo ee aad soo gudbiso inta aad ku jirto boggan.
Waxaan u adeegsanaa labiska 'cookies ID ID' iyo kuukiisaska joogtada ah si aan ula soconno dabeecadaha isticmaaleyaasha iyo inaan u keydinno macluumaadka aad ku dhejiso foomamkeenna. Kuksi aqoonsi ah ayaa dhacaya marka aad xidho biraawsarkaaga. Kuksi joogto ah ayaa ku sii jiraya wadistaada adag wakhti dheer. Waad ka saari kartaa cookies-ka joogtada ah adoo raacaya tilmaamaha lagu bixiyay galka “caawinta” biraawsarkaaga. Haddii aad diiddo cookies-ka, weli waad isticmaali kartaa boggan, laakiin awoodda aad u leedahay inaad isticmaasho meelaha qaar ee degelkeenna way xadidnaan doontaa.
Anshaxa bartilmaameedka / dib-u- bartilmaameedka
Waxaan iskaashi la yeelanaa shabakad xayeysiis qeyb saddexaad ah ama mid ku soo bandhigeysa xayeysiiska bartayada ama maareynta xayeysiiska ku leh bogagga kale. Wada-hawlgaleheenna shabakadda ayaa adeegsanaya cookies iyo beakacyada websaydhka si ay u ururiyaan macluumaadka shaqsi ahaan aan lagu aqoonsan karin ee ku saabsan howlahaaga websaydhka iyo websaydhyada kale, si ay kuu siiyaan xayeysiis la beegsaday oo ku saleysan danahaaga.
Beakoni-websaydh / hibo weel
Waxaan shaqaaleynaa teknolojiyad softiweer ah oo loo yaqaan 'gifs saafi ah' (aka web beacons) si ay nooga caawiso inaan si wanaagsan u maamulno waxyaabaha ku jira degelkeena annaga oo noo sheegaya waxa ku jira ee wax ku oolka ah. Gifs cad waa sawiro yar yar oo leh aqoonsi u gaar ah, oo la mid ah shaqooyinka loo yaqaan 'cookies' waxaana loo isticmaalaa si loola socdo dhaqdhaqaaqa internetka ee isticmaalayaasha webka. Marka la barbardhigo buskudka, kuwaas oo lagu kaydiyay kombuyuutarka isticmaaleha ee adag, gifs cad ayaa lagu dhejiyaa si aan muuqan bogagga shabakadda waxayna ku saabsan yihiin cabbirka joogsiga buuxa dhamaadka weedhan. Annagu kuma xidhinno macluumaadka lagu soo ururiyey hadiyado cad macluumaadkeenna macluumadka shaqsiyeed lagu garan karo.
Falanqaynta / faylasha galka
Waxaan u ururinaa qaar ka mid ah macluumaadka si otomaatig ah waxaana ku kaydineynaa faylalka diiwaanka. Macluumaadkaan waxaa ku jira cinwaanka borotokoolkaaga internetka (IP), nooca biraawsarka, bixiyaha adeegga internetka (ISP), tixraaca / bogagga ka bixista, nidaamka hawlgalka, taariikhda / waqtiga shaambada, iyo xogta websaydhka.
Waxaan u isticmaalnaa macluumaadkan, kaas oo aan aqoonsanaynin isticmaaleyaasha shaqsiyeed, si loo falanqeeyo isbeddelada, loo maamulo goobta, loola socdo dhaqdhaqaaqa isticmaaleyaasha agagaarka bartayada isla markaana aan soo aruurino macluumaadka tirakoobka ee ku saleysan adeegsigeenna guud ahaan. Kama xiriirineyno xogtani si toos ah aruurinta macluumaadka shaqsiga lagu garan karo.
Adeegsiga tikniyoolajiyadda raadraaca ee adeeg-bixiyeyaashayada adeegga, shuraakada tikniyoolajiyadda ama hantida kale ee saddexaad ee ku yaal bartayada (sida kuwa ku lugta leh raadraaca guusha xayeysiinta) ma daboolayo siyaasadan asturnaanta. Dhinacyadan saddexaad waxay isticmaali karaan cookies, hibo cad, sawirro iyo qoraallo si ay uga caawiyaan inay si wanaagsan u maareeyaan waxa ku jira boggan. Annagu awood uma lihin helitaan ama xakameyn tikniyoolajiyadan. Uma xidhno macluumaadka ay ururiyeen dhinacyadan seddexda macaamiisha macaamiisha ama macluumaadka shaqsiga lagu garan karo.
Amniga macluumaadkaaga shaqsi aad ayey muhiim noogu tahay. Markaad gasho macluumaad xasaasi ah (sida kaarka-amaahda, koonto-koonti ama macluumaad ganacsi-gaar ah) foomamkayaga, waxaan qarinaynaa gudbinta macluumaadkaas annagoo adeegsanayna teknolojiyadda lakab adag oo ammaan ah (SSL).
Waxaan raacnaa heerarka guud ahaan la aqbalay si aan u ilaalino macluumaadka shaqsiyeed ee naloo soo gudbiyey, labadaba inta aan gudbineyno iyo markii aan helno. Si kastaba ha noqotee, ma jiro hab la isugu gudbiyo internetka ama habka kaydinta elektiroonigga, ee aan 100% aamin ahayn. Sidaa darteed, ma dammaanad qaadi karno inay tahay nabadgelyo buuxda. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan amniga boggayaga, waad nala soo xiriiri kartaa at info@millionmakers.com
6. Macluumaad Dheeraad ah
Xiriirimaha bogagga saddexaad
Boggan waxaa ku jira xiriiriyeyaal websaydha kale oo dhaqannada asturnaanta ay ka duwanaan karaan kuwayaga. Markaad u gudbiso macluumaadkaaga shaqsi mid ka mid ah goobahaas, macluumaadkaaga waxaa xukuma siyaasadahahooda gaarka ah. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad si taxaddar leh u akhrido siyaasada gaarka u ah degel kasta oo aad booqato.
Aaladaha warbaahinta bulshada
Boggeena waxaa ka mid ah astaamaha warbaahinta bulshada (tusaale ahaan, facebook, twitter, iwm sida ku xusan websaydhkeena iyo aalado sida badhanka "Share This") ama barnaamijyo mini-dhexgal ah. Astaamahani waxay soo ururin karaan cinwaankaaga IP-ga iyo bogga aad booqanayso boggan, oo waxay dejin karaan cookie si ay ugu suurtagasho muuqaalka inuu si habboon u shaqeeyo. Astaamaha warbaahinta-bulshada iyo aaladaha loo adeegsado waxaa sidoo kale martigeliya dhinac saddexaad ama toos ayaa loogu marti geliyaa degelkeenna. Isdhexgalkaaga astaamahan waxaa xukumaya siyaasadaha gaarka ah ee shirkadda bixisa.
Waxaan ku soo bandhigi karnaa marag-kacyada shaqsi ee macaamiisha qancisa, marka lagu daro ogolaanshaha kale, boggayaga. Markhaatiyadan waxaa laga soo qaatay adeeg bixiyaha adeegga saddexaad, kaas oo kaa codsan kara macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, oo ay ku jiraan magacaaga iyo cinwaanka e-maylkaaga. In kasta oo aanan ugu dhejin macluumaadka shakhsi ahaan lagu aqoonsan boggan, haddii aad rabto inaad cusboonaysiiso ama tirtirto marqaatigaaga, fadlan la xiriir xakameeyaha xogta.
Waxaan cusbooneysiin karnaa siyaasadan asturnaanta si aan uga tarjunno isbeddelada ku saabsan dhaqamadayada macluumaadka. Haddii aan wax isbedel ah ku sameyno wax kasta, waxaan kugu soo ogaysiin doonnaa ogeysiis ku saabsan boggan ka hor inta isbeddelku uusan dhaqan galeyn. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad marmar dib u eegto boggan wixii macluumaada ee ugu dambeeyay ee ku saabsan dhaqamadayada asturnaanta.
Fiiro gaar ah * Siyaasad ahaan, uma wadaagi karno ama kuma iibinayno macluumaadka macaamiisheena qof kasta oo saddexaad, illaa iyo illaa adeegga la doorto laga baaraandego wada-hawlgalayaashayada, la-hawlgalayaasha, bixiyeyaasha adeegga. Faahfaahintaada si adag ayaa loo xafidayaa si waafaqsan Nidaamkayaga Asturnaanta.
Codso Quote a
Waxkastoo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Waxaan soo qaadnay sannado khibrad ah si aan u dhammaystirno takhasuskeenna iyo ururrada caalamiga ah iyo iskaashiga aannu u fidinno adeegyo iyo xalal wanaagsan macaamiisheenna qiimaha ugu badan ee Tartannada.
Waxaan u abuurnaa fursado shaqsiyaadka iyo shirkadaha si ay u soo iibsadaan nidaamyo ka sii wanaagsan, ku habaysan oo ay kuxiraan xalal.
Waa adiga. Waxaan si fiican isku baranay, ganacsigaaga iyo ujeedooyinkaaga sifiican kahor intaanan kahadlin fursadaha ama fursadaha suurtogalka ah.
Iyada oo loo marayo khibradeena ballaaran iyo adeegyo kala duwan oo ay bixiso shirkadeena, waxaan ka caawineynaa shaqsiyaadka, qoysaska, ganacsatada iyo shirkadaha iyadoo la adeegsanayo khibradeena gaarka ah si dib loogu raro, loo waardiyeeyo, la balaariyo loona kobciyo, waxaan si fiican u heysan nahay inaan kugu hagno wadada guusha. Haddii aad xiiseyneyso dib u dejinta, midaynta iyo helitaanka ama raadinta adeegsiga howlaha gadaal ee xafiiskaaga, raadinta raasamaal ama lammaane istiraatiiji ah ama aad raadsato qorshaha xiga ee jiilalkaaga, la-tashi dhaqaale iyo taakuleyn, ama aad raadineyso adeegyada guryaha ama adeegyada la xiriira socdaalka. ama waxbarasho dibedda ah ama xalal IT ah waxaan kaa caawin karnaa dhamaan adeegyada aan u joogno inaan ku taageerno
Shaqsi ahaan ama milkiile ama maamule shirkad madax banaan ama shirkad, qof walba waxaa lagu loollamayaa kaliya habka loo maareeyo howlaha maalinlaha ah, laakiin, si wada jir ah isaga oo hubinaya muddada gaaban iyo guusha muddada dheer naftooda. Laakiin maadaama ay qiimayaashu kor u kacayaan iyo shuruudaha u hoggaansanaanta adoo abuuraya xitaa caqabado waaweyn, waxaa laga yaabaa in lagaa tago adiga oo isweydiinaya sida aad ugu sii noolaan doontid - oo aadan ka soo muuqan doonin inaad sii fiicaneyso - inta lagu jiro xilligan cusub, halkan waa meeshii aan ku tallaabsan lahayn.
Tallaabadayadu waxay ku saabsan tahay Tallaabada Tillaabo - Bilow ilaa guul
Tallaabada 1: Aqoonso baahiyaha Shaqsiyaadka / Qoyska / Ganacsiga / Shirkadaha.
Tallaabada 2: Xulashada fursadaha ugu fiican / Xulashada loogu talagalay in si guul leh loo gaaro Yoolalka iyo ujeeddooyinka.
Tallaabada 3: Diritaanka xulashooyinka ugu wanaagsan ee oggolaanshaha.
Tallaabada 4: Hadday suurtagal tahay, kormeerida booqashooyinka dalka, haddii aan horey loo sii joogin.
Tallaabada 5: Baro suuragalnimada.
Tallaabada 6: Talo-siinta dhaqaalaha iyo cashuurta, haddii lagu dabaqi karo.
Tallaabada 7: Dulmar guud iyo sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan fursadaha suurtagalka ah.
Tallaabada 8: Kormeerka hawsha.
Tallaabada 9: Diyaarinta iyo u gudbinta Mas'uuliyiinta ay khusayso.
Tallaabada 10: Guusha!
Aad ayey muhiim u tahay inaad dooratid lammaanaha saxda ah himilooyinkaaga iyo himilooyinkaaga, annaga oo ah Million Makers ayaa u diyaar ah inaan hubino inaad ku guuleysato.
Macaamiishayadu waa qoyskeena waxaanan marwalbana macaamiisheenna uga digeynaa naxariis iyo samir si aan u hubinno inay guuleystaan.
Million Makers waa hal bixiyaha xalka xallinta, waxaan bixinaa xalal gaar ah oo loo habeeyay shaqsiyaadka, qoysaska, ganacsatada iyo shirkadaha kuwaas oo kaa caawinaya inaadan kaliya dalkaaga ahayn laakiin sidoo kale caalami ahaan arrimaha la xiriira socdaalka, socdaalka maalgashiga, socdaalka ganacsiga, rukhsadaha shaqada, ogolaanshaha deganaanshaha , dhalashada, waxbarashada caalamiga ah, la tashiga ganacsiga, xalalka ganacsiga, meeleynta caalamiga ah, xalalka gaarka loo leeyahay ee HR, iibka iyo iibsashada ganacsiga, Xallinta CRM, albaabka bixinta, sameynta shirkadda 98 sharciyo, furitaanka koontada bangiga, diiwaangelinta astaamaha ee 119 dal oo leh hal codsi kaliya. Foomka, shati siinta ganacsiga, xafiisyada meheradda ah, tirooyinka casriga ah, ballaarinta caalamiga ah, adeegyada sharciga, qiimeynta ganacsiga, la-talinta sharciga, la-talinta dhaqaalaha, la-talinta guryaha, wareejinta qunsuliyadda, qalabaynta iyo ka shaqeynta maalgelinta raasamaalnimada, dadaallada iyo u hoggaansanaanta, waxaan sidoo kale ku takhasustay bixinta xalka IT-ga loo habeeyay sida horumarinta Web, Eco xalka ugu adag, horumarinta barnaamijyada, suuqgeynta dhijitaalka ah, xalka softiweeriyada iyo horumarka tikniyoolajiyada ee loo yaqaan 'Blockchain technology' si magacooda looga dhigo tiro aad u qiimo badan ..
Adeegyadeena IT waxaa loo fidiyaa ganacsi balaaran oo noocyo iyo noocyo ah. Waxaan u adeegnaa warshadaha soo socda:
Geeddi socodka Ganacsiga Dibedda
Kaabayaasha iyo Dhismaha
Cuntada & Cabbitaanka
Socdaalka iyo Dalxiiska
Wax Soo Saarka Beeraha & Cilmi baarista
Waxaan ku bixinnaa adeegyo iyo taageero degmooyinka hoos ku xusan:
Annaga oo ah shuraako caalami ah, waxaan awood siineynaa macaamiisheenna inay si dhakhso leh u koraan
wax badan oo sii waara ayagoo kugu kallifaya dariiqaaga koritaanka.
Waxaan ku bixinnaa xalal kaladuwan hal saqaf hoostiisa, 1 iskaashi dhammaan baahiyahaaga kobcinta maxalliga ama caalamiga ah.
Had iyo jeer u joog si aad uga jawaabto su'aalahaaga, kuna taageerno yoolalkaaga iyo himilooyinkaaga, oo kaa caawiya inaad badbaadin karto waqti iyo lacag.
Shuruudaha qof walba waa kala duwan yihiin, sidaa darteed, waxaan had iyo jeer u qaabeynaa sida ku-habboon oo loogu talagalay adiga, jidkaaga koritaanka caalamiga ah.
Khidmadaha adeegyadeena waa kuwo aad u tartamaya oo aan lahayn kharashyo qarsoon, oo u shaqeeya dadka oo dhan, ha ahaato Shakhsiyaad ama mid yar, mid dhexdhexaad ah ama shirkad weyn.
Sanado badan anagoo la shaqeynayna Shakhsiyaadka, qoysaska, iyo shirkadaha, waxaan horumarinay aqoon muhiima oo ku saabsan adeegyo fara badan oo kala duwan, caalami ahaan.
Waxaan leenahay kooxo khubaro khibrad leh, ururo iyo shuraako si aan u siino macaamiisheenna khibrad aad u badan.
Waxaan nahay Shuraako, Adeeg Bixiyayaal, Qareenno, CFP-yada, Xisaabaadka, Ku-xisaabtamayaasha, Khabiirada dhaqaalaha, Khabiirada Socdaalka iyo dadka awooda u hanuuniya natiijooyinka.
Markaan wajaho go'aan adag marna kama tanaasulin qiyamkeena iyo mabaadi’da. Waxaan sameyneynaa waxa saxda ah, mana ahan waxa ugu fudud.
Waxaan u adeegnaa shakhsiyaad, qoysas iyo shirkado caalami ah, sidaa darteed, waxaan hurin karnaa oo aan kor ugu qaad karnaa koritaankaaga adduunka.
Waxaan halkaan u joognaa inaan fududeyno dib-u-dejintaada, kobcintaada, ballaarintaada iyo baahiyahaaga annaga oo bixinayna 1 meel oo xiriir ah
Joogitaankayaga gaarka ah ee suuqyada caalamiga ah ee muhiimka ah ayaa na siiya, aqoonyahano maxali ah oo karti u siinaya inay kuu fidiyaan madal taageero buuxda oo dhameystiran.
Adeegyada Socdaalka: 22156.
Adeegyada Sharciga: 19132.
Adeegyada IT: 1000 + Mashaariic
Shirkadaha Shaqeynaya: 26742.